CYBERFESTIVAL Isikhali Senyukliya Mahhala - Umhlaba Mashi
Ikhaya » Izaziso » Ezokuxhumana Okusemthethweni » CYBERFESTIVAL Mahhala ezikhali zenuzi
I-World Cultural CyberFestival MAHHALA IZIKHALI ZENULETHI kuqoqwa imicimbi engu-190
Izakhamizi zomhlaba zinelungelo lokugubha ukuqala kokusebenza kweSivumelwano Sokuvinjelwa Kwezikhali Zenuzi (TPANlokho kuzokwenzeka e-United Nations ngomhlaka 22/1/2021. Kutholakale ngenxa yamasiginesha amazwe angama-86 nokuqinisekiswa kwamazwe angama-51, esibonga kuwo isibindi sabo sokuthatha amandla amakhulu enuzi. Ngaphakathi kwe-ICAN, umkhankaso owukhuthazile futhi ngenxa yalesi sizathu wathola uMklomelo KaNobel Wokuthula ngonyaka wezi-2017. Kulezi zinsuku, kubanjwa imicimbi engaphezu kuka-160 emazweni kuwo wonke amazwekazi ukuyixhasa.
Le CyberFestival ingenye yazo. Ihlose ukwenza umnikelo wayo omncane kunqubo ezoqhubeka nokukhula kuze kube yilapho izikhali zenuzi ziqedwa nya emhlabeni futhi ziguqulela ikhasi kulesi sahluko esimnyama sempucuko yabantu.
Emahoreni ayi-10 angenaziphazamiso, kuzosakazwa uhlelo lwamavidiyo ngeziteshi zeZoom neFacebook ezibukeza amakhonsathi omlando nemikhosi yokuthula kanye nezikhali zenuzi ezinezingoma eziyizifanekiselo, izitatimende, izenzo nokwesekwa kobuntu bomhlaba wezamasiko, ezemidlalo kanye nezepolitiki umkhakha, ubufakazi bezinkomba zomlando nezamanje, izitatimende zeNobel Peace Prize, ukwesekwa ngamalungu ephalamende kanye nomasipala, ukwesekwa okuvela ezinhlanganweni, ngisho nezenzo ezinhlanganweni zezishoshovu, izakhamizi ezejwayelekile, abantu abasha kanye nezingane zesikole ukuthi ngamamashi abo, imibukiso, imizamo amaqoqo, izikole, amanyuvesi nezimpawu zokuthula bavikela konke okuphathelene nezwe elingenazimpi futhi, ngaphandle kwezikhali zenuzi.
Kulokhu ICyberFestival World Cultural MAHHALA IZIKHALI ZENUZI ¡Isinyathelo esihle esintwini! Imicimbi eyi-190 iqoqwa lapho amakhulu ezinhlangano namakhulu ezinkulungwane zabantu abavela kuwo wonke amazwekazi bebamba iqhaza.
Usuku: UJanuwari 23 we-2021
Uhlelo: ICyberfestival izoqala ngo-10: 30 GMT-0 futhi izophela ngo-20: 30 GTM-0.
Amabhulokhi okuqala nawezokugcina, athatha ihora elilodwa lilinye, azonikezelwa ekusakazeni ukuhlanganiswa kwemicimbi yezikhungo ebaluleke kakhulu eyenzeka ngokuqala ukusebenza kwe-TPAN endlunkulu yeZizwe Ezihlangene.
Amahora ayi-8 phakathi ahambisana nezingxenye eziyi-8, ngalinye lazo lizoqala ngokwethulwa kokuqukethwe kwalo. Okuqukethwe kushintshelwa cishe endaweni ngayinye: I-Oceania-Asia ne-Europe-Africa-America.
Eminye imicimbi engokomlando futhi iphathelene nokuqashelwa kwezenzo neminikelo ekhombe inkathi.
Abanye, iningi, yizenzo neminikelo eyenziwe eminyakeni yamuva nje ngokuthula futhi, ikakhulukazi, ukuqedwa kwezikhali zenuzi.
Kukhona uhlelo olunemininingwane nakho konke okuqukethwe, amashejuli nabahlanganyeli.
Okunye okuqukethwe: Ngokungeziwe kokuqukethwe okungenhla, okunye okwenziwe nge-documentary nolwazi mayelana ne- Imicimbi engu-157 Lezi zinsuku zenziwa kuwo wonke amazwekazi yizinhlangano ze-ICAN.
Kubalulekile uku okwenza lesi sigaba esisha somlando sibonakale. Njengoba sonke singaqinisekisa, ukuvunywa kwe-TPAN, ngokuba ngomunye wemicimbi ebaluleke kakhulu emhlabeni, akukho emakhasini angaphambili emaphephandabeni amakhulu noma kuvula ukusakazwa kwezindaba kwamanethiwekhi amakhulu we-TV. Kuyisimo sokuthi emazweni amaningi ohulumeni babo abasekele futhi / noma baqinisekisa i-TPAN izakhamizi zabo abazazi. Kukhona ukufihla okukhulu kwalolu daba ngabezindaba. Yingakho kungukuzibophezela kwethu ukwenza leli qiniso elibalulekile libonakale ezingeni elidumile ngendlela ekhangayo, sikunikeze ukusabalalisa okuphezulu futhi sisekele izifiso zabantu abancane abamelene ngqo nalezi zikhali.
Ngokunikezwa isikhathi eside, okuqukethwe kokugcina kuzorekhodwa ukuze kubonakale futhi ngezinye izikhathi ngokuya ngentshisekelo yomuntu ngamunye.
INHLANGANO: Yize lesi sinyathelo sikhuthazwe yi-MSGySV, le CyberFestival ingumphumela wokusebenzisana kwabantu abaningi namaqembu futhi ihlanganisa ukwehluka okukhulu kobudlelwano namazwe.
Isifiso ukuphinda le CyberFestival lapho iqembu elisha lamazwe lijoyina i-TPAN, ngamandla amakhulu okukhula lize lifike ekuqedweni kwalo kokugcina.
UKUXHUMANA KOMHLABA ngaphandle kwezimpi nodlame lapho kuqala ukusebenza kwe-TPAN
INGQUNGQUTHELA YABASEBENZI e-COSTA RICA: